Zara နဲ့ Mango ယှဉ်လာရင် ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
8 May 2018 . 11:52 AM
မိန်းကလေးတွေအတွက် Outfit ၊ Shoe နဲ့ Bag တွေဖြစ်တဲ့ Clothing & Accessories တွေက အရေးပါလွန်းလှပါတယ်။ ကိုယ်ဝတ်ဆင်တဲ့ Outfit တိုင်းက Quality ကောင်းနေမှ ရက်ရက်ရောရောနဲ့ ဝယ်ချင်ကြတယ်။ အဲဒီအတွက် Quality ကောင်းတဲ့ Brand ကိုကြည့်ပြီး ရွေးဝယ်ကြတယ်။ ဒီလို ရွေးဝယ်ကြတဲ့ထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ အကြိုက်ဆုံးနဲ့ အများဆုံး ဝယ်ယူဖြစ်တဲ့ Brand နှစ်ခုက Zara နဲ့ Mango ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ ပိုပြီးသိသိသာသာကို မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်လို့လာပါတယ်။ ဒီလို အသည်းစွဲဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေက ပေးရတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ပြန်ရတဲ့ အရည်အသွေးက ညီမျှတယ်။ Idea လည်း ဆန်းတဲ့အပြင် နေရာဒေသမရွေးလိုက်ဖက်တဲ့အတွက် ဝတ်ပျော်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော်ဖြစ်နေတဲ့ Brand နှစ်ခုယှဉ်လာတဲ့အခါ “ဘယ် Brand ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ”၊ “ဘယ် Brand ကို တစ်ကယ်ရွေးချယ်သင့်လဲ” လို့မေးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူတို့ Brand နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားမှုကို တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Zara Shirt vs Mango Shirt
Zara Shirt Dress vs Mango Shirt Dress
Zara Shoe vs Mango Shoe
တစ်ခါတစ်လေကျရင် Zara နဲ့ Mango ရဲ့ Fashion Idea က တူတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ မတူလှပါဘူး။ Mango ရဲ့Top ဒီဇိုင်းတွေက Simple ပိုဖြစ်ပြီး Classic Type ကို သွားပါတယ်။ Zara ကတော့ Youth Trend ဘက်ကို ပိုပြီးလိုက်ပါတယ်။ Colorful ပိုဖြစ်တယ်။ Price Point အရလည်း Mango က Zara ထက်အနည်းငယ်ပိုများနေတာကို အားလုံးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Mango ကို ဝတ်ဆင်ကြတဲ့လူအများစုက Business Men နဲ့ Business Women တွေ၊ Minimalist တွေပိုပြီးများပါတယ်။ Zara ကို ဝတ်ဆင်ကြတဲ့သူတွေကတော့ Youth တွေ၊ Fashionista တွေပိုပြီးတော့ များပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ်က ပိုပြီး Fashionable ဖြစ်တဲ့ Clothing မျိုးကို ပိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Zara က ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်မှာပါ။ Fashionable ဖြစ်တာမျိုးမကြိုက်ဘူး…Steady & Stable ပုံစံမျိုးကိုသာပိုပြီး နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တာ့ Mango က ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်မှာပါ။
Zara နဲ့ Mango ယှဉျလာရငျ ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ?
မိနျးကလေးတှအေတှကျ Outfit ၊ Shoe နဲ့ Bag တှဖွေဈတဲ့ Clothing & Accessories တှကေ အရေးပါလှနျးလှပါတယျ။ ကိုယျဝတျဆငျတဲ့ Outfit တိုငျးက Quality ကောငျးနမှေ ရကျရကျရောရောနဲ့ ဝယျခငျြကွတယျ။ အဲဒီအတှကျ Quality ကောငျးတဲ့ Brand ကိုကွညျ့ပွီး ရှေးဝယျကွတယျ။ ဒီလို ရှေးဝယျကွတဲ့ထဲမှာ မိနျးကလေးတှေ အကွိုကျဆုံးနဲ့ အမြားဆုံး ဝယျယူဖွဈတဲ့ Brand နှဈခုက Zara နဲ့ Mango ဖွဈလို့နပေါတယျ။
၂၀၁၆ခုနှဈမှာ ပိုပွီးသိသိသာသာကို မိနျးကလေးတှရေဲ့ အသညျးစှဲဖွဈလို့လာပါတယျ။ ဒီလို အသညျးစှဲဖွဈလာရတဲ့အကွောငျးအရငျးတှကေ ပေးရတဲ့ ဈေးနှုနျးနဲ့ ပွနျရတဲ့ အရညျအသှေးက ညီမြှတယျ။ Idea လညျး ဆနျးတဲ့အပွငျ နရောဒသေမရှေးလိုကျဖကျတဲ့အတှကျ ဝတျပြျောပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး မိနျးကလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျောဖွဈနတေဲ့ Brand နှဈခုယှဉျလာတဲ့အခါ “ဘယျ Brand ကို အကွိုကျဆုံးလဲ”၊ “ဘယျ Brand ကို တဈကယျရှေးခယျြသငျ့လဲ” လို့မေးလာနိုငျပါတယျ။ ဒီအတှကျ သူတို့ Brand နှဈခုရဲ့ကှာခွားမှုကို တငျပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
တဈခါတဈလကေရြငျ Zara နဲ့ Mango ရဲ့ Fashion Idea က တူတယျလို့ထငျရပမေယျ့ တကယျတမျးတော့ မတူလှပါဘူး။ Mango ရဲ့Top ဒီဇိုငျးတှကေ Simple ပိုဖွဈပွီး Classic Type ကို သှားပါတယျ။ Zara ကတော့ Youth Trend ဘကျကို ပိုပွီးလိုကျပါတယျ။ Colorful ပိုဖွဈတယျ။ Price Point အရလညျး Mango က Zara ထကျအနညျးငယျပိုမြားနတောကို အားလုံးလညျး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ Mango ကို ဝတျဆငျကွတဲ့လူအမြားစုက Business Men နဲ့ Business Women တှေ၊ Minimalist တှပေိုပွီးမြားပါတယျ။ Zara ကို ဝတျဆငျကွတဲ့သူတှကေတော့ Youth တှေ၊ Fashionista တှပေိုပွီးတော့ မြားပါတယျ။
အဲဒီတော့ ကိုယျက ပိုပွီး Fashionable ဖွဈတဲ့ Clothing မြိုးကို ပိုကွိုကျတယျဆိုရငျတော့ Zara က ကိုယျ့အတှကျ ဖွဈမှာပါ။ Fashionable ဖွဈတာမြိုးမကွိုကျဘူး…Steady & Stable ပုံစံမြိုးကိုသာပိုပွီး နှဈသကျတယျဆိုရငျတာ့ Mango က ကိုယျ့အတှကျ ဖွဈမှာပါ။